Qabsoo Bilisummaaf goonu akka bu’aa bahii qabu ni beekna! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsQabsoo Bilisummaaf goonu akka bu’aa bahii qabu ni beekna!
Har’a Hoggantoota ABO Galaan Jiran Gaafannee Ture. Haalli keessa jiran ulfaata dha. Madaan Jaal Battee Urgeessaa Sammuu irraa fi maddii irraa sirnan fayyee hin qoorref. Gadaa Gabbisaa, Ibsaa Gaaddisaa,Daawwit Abdataa, Lammii Beenyaa akka malee qaaman hir’ataniiru. Akkuma kaleessaa yaaddoo Oromiyaan ala kan dhuunfaa hin qaban. Akkuma HD ABO Jaal Daawud Ibsaa dabalaatee,hoggantoonni ABO kanaan dura yeroo gara Oromiyaa dhufan, Uummata waliin qabsa’uuf,Uummata waliin hidhamuu fi kkf dandamachuun qabsoo gaggeessuf hirphuu galan osoo hin sharafiin kan aarsaa kaffalaa jiran ta’u hubanneerra. Isaanis hidhaa kana irraa kan ba’an qabsoo Uummata Oromoo qofaani. Kanaaf nutis hirphuu Hoggantoota ABO waliin seenne osoo hin sharafiin,kan harka qabnutti jabaachuun, kan hin dammaqne dammaqsuun,wal ijaarun yeroo dhumaf hunduu wareegama Gootota kaleessaa fi hoggantoota ABO har’atti firii gochuu qabna. Hoggantoonni keenya hunduu mana hidhaa irraa ni ba’u. Lafa fi nama Oromiyaa irraattis Abbaa ni ta’u. Takka shakkiin hin jiru.
Eda gara irribaatti ennaan deemu Maxxansa Leta Kenei Aga dhimma achi buutee Gammee Kan inni barreesse dubbiseen rafe. Afaanii baasee jechuu baadhullee keessa kootti Waaqayyo nama kana ati tiksi, hamaa nu hindhageessisin jedheen rafe. Gammee hin beeku. Seenaan isaa garuu Kanan beeku caalaatti na gaddisiise. Bulee ennaan ka’u yaaddoon namoota baayyee gaddatti jijjiirameen ammas asuma Marsaa hawaasummaa kana irraan deebi’ee arge. Keessa kootu na cabe. Baayyeen gadde. Dunkaanni gammachuuf bu’e ennaa gaddatti jijjiiramu arguu caalaa waanti laphee namaa cabsu hin jiru.
Bor jennee boritti aggaamnee, tokko ta’uurra lama ta’uu wayya jennee, abboomii Waaqayyoo guunnee, gaa’ila dhaabbachuuf bu’aa ba’ii hedduu keessa dabarra. Har’a gubbaa ijaajjinee bor ennaa daa’imman keenya Harka qabannee deemnu waan abjoonnuuf dadhabbii nuti Cidha keenyaaf kaffallu nutti hin mul’atu. Nama jaallannu waliin gaa’ila dhaabbannee godoo tokko Jala waliin bullee ka’uuf hawwii nuti qabnu hamilee nutti horee Har’a keenya dagannee boritti aggaamna.
Har’a of agabsinee, ofitti waakkannee, isa argannu qusnee Gammachuu keenya akka nu waliin qooddataniif dhangaa cidhaa qopheessina. Tarii ammoo Maaltu beeka, haadhaa fi abbaan dhala dhala isaanii arguuf jarjaranis gammachuun isaanii Kan keenya caaluu mala ta’aa! Garuu Kan nuti abjoonne ta’uu dhiisee ennaa waanti faallaa raawwatu maatii otuu hin taane naannoo sana guutuuf gadda. Eelaa eelaa caalu ta’ee darba. Waaqayyo mudannoo akkasii irraa nuun haa eegu. Gammee koo, dhiigi kee akka dhiiga Naabutee gara Uumaa isheetti ol haa iyyattu! Ati dheengadda gammachuu kee nuu qoodde nuti ammoo Har’a gadda kee waliif qoodaa jirra. Abbaan dhugaa dhiiga keef haa dubbatu! Inni dhoksaan Harka isaa sirratti aggaame, nama foonii jalaa dhokatus Waaqa kee isa abbaa Lubbuu keetii jalaa lafa itti miliqu hin qabu. Dhugaan kee haa falmatu!!
Garaan na gubate Gammee koo!
– Dheengadda fuutee kee dhaga’een “Baga gammadde” siin jedhe
– Har’a duutee kee dhaga’ee akkamittan “Nagaan boqodhu” siin jedhaa?!
Natti ulfaate dhugaa!
Suuqiin deema jettee manaa baatee reeffi kee bishaan qarqaratti argame yoo jedhan waanin dubbadhun wallaale. Biyya itti lubbuun dhala namaa gatii dhabde!
Nagaan boqodhu. Dhugaan kee haa mul’attu!
Qabsoo keessatti waanti goonu akkana: 1. Namni Oromoo tokko yoo fedhii fi dandeettii qabaate, akka…
#PPn ni kufti qabsoo itti fufa! #Breaking News! Hidhamtoonni Oromoo 46 ta'an eega dheengadda galgalaa kaasee…
Guutuummaa Oromiyaa Keessatti Filannoon Akka Gaggeeffamu Shakki Hin Qabu: Angawaa Paartii Badhaadhinnaa WAASHINGITAN, DIISII —(voaafaanoromoo)---…